Otu esi edozi google captcha na-akpaghị aka na ReBreakCaptcha | Site na Linux
Otu esi edozi google captcha na-akpaghị aka na ReBreakCaptcha
Ruo oge ụfọdụ, agha megide bots ndị na-ahụ maka ịwakpo saịtị spam na-agba mbọ igbochi nchebe nke ibe weebụ ọ bụla emewo ka obi sie ike. Otu n'ime ihe ndị kasị eji ngwaọrụ iji lụsoo ndị a iwe iwe bụ google captcha, karịsịa mbipute ahụ ReCaptcha V2, pero lamentablemente se ha difundido una vulnerabilidad en esta herramienta que permite resolver las captcha de manera automática.
Ndị na-esonụ kpere mmụta isiokwu ga-ekwe ka anyị mebie nche nke ReCaptcha V2, na-ewere uru nke nhọrọ ọdịyo nke ọ na-enye. Edemede sitere na ntinye ọzọ, nke a kọwara nsogbu ahụ n'ụzọ zuru ezu ma nyefee edemede nke na-enye anyị ohere idozi captchas na akpaghị aka.
1 Kedu ihe bụ ReBreakCaptcha?
2 Wụnye ma hazie ReBreakCaptcha
3 Mkpebi banyere ReBreakCaptcha
Kedu ihe bụ ReBreakCaptcha?
Ọ bụ a free ngwa na-ewe uru nke a vulnerability nke - Onyekachi V2, na dozie captcha na-akpaghị aka, maka nke a jiri ọba akwụkwọ akpaaka selenium, na Google Kwadoro Okwu Google Api na algọridim dị iche iche.
Ngwá ọrụ ahụ dị mfe, na-agafe n'ụzọ atọ, nke mbụ ebe ọ na-edozi captcha na-ewu ewu nke «Abụghị m onye robot«, Mgbe captcha ga-edozi ga-apụta, họrọ ọdịyo nhọrọ, nata audio na hazie ya na Google Kwadoro Okwu Google ApiNa mmechi, tinye onu ogugu ndi Api ghotara ma tinye ya na ogige captcha.
Api Na-achọpụta Okwu Google Api nwere ike ịda ugboro ugboro, yabụ ReBreakCaptchaNa-agbalị ọzọ dị iche iche ruo mgbe ị nwetara ihe ngwọta dị mma.
Wụnye ma hazie ReBreakCaptcha
Iji mee ihe ReBreakCaptcha Anyị ga-agbaso obere usoro ole na ole, ebe ọ bụ na a na-eji ụzọ ederede Windows ede akwụkwọ mbụ.
Nke mbu, anyi aghaghi itinye ihe ndi kwesiri ekwenye maka edemede a ka oru:
sudo pip wụnye pydub SpeechRecognition selenium
Na-esote anyị ga-mmepụta oyiri repository nke edemede:
Anyị na-aga na desktọọpụ cloned wee dezie klas ahụ, yana ụzọ kwekọrọ na Linux.
Ha kwesiri igbanwe ozi ndi a
# Firefox / Gecko Driver metụtara FIREFOX_BIN_PATH = r "C: \_ Faịlụ mmemme (x86) \_ Mozilla Firefox \_ Firefox.exe" GECKODRIVER_BIN = r "C: \_ geckodriver.exe"
Site n'ụzọ na Linux
# Firefox / Gecko Driver metụtara FIREFOX_BIN_PATH = r "/ usr / bin / firefox" GECKODRIVER_BIN = r "/ usr / bin / geckodriver"
N'otu ụzọ ma ọ bụrụ na ị na-eji python3, biko dochie xrange site range. Anyị ga-agbanwe URL ahụ ebe anyị chọrọ itinye edemede ahụ (Nke ahụ bụ, nke anyị chọrọ ka Akwụkwọ Nsọ dozie).
Anyị nwere ike ime ya na akara ebe ndị na-esonụ pụtara:
N'ikpeazụ, anyị ga-agba ọsọ ReBreakCaptcha, ọ ga-emepe ihe nchọgharị na url nke egosiri ma mepụta usoro iji dozie captcha na ajụjụ.
Mkpebi banyere ReBreakCaptcha
Ihe odide a nwere ike ịbụ ihe ndabere iji jiri ya na usoro dị iche iche na na eke na iji usoro dị mfe anyị nwere ike ịkwalite ya. Ojiji nke ngwa ọrụ a kwesịrị ịbụ maka iji agụmakwụkwọ, yana ndị obodo n'ozuzu ọ dị mkpa iji kesaa ya dịka ọ na-ekwe nkwa na n'oge na-adịghị anya anyị ga-enwe mpempe akwụkwọ na-edozi nsogbu a.
Ihe dị nro na-arụ ọrụ ruo ugbu a, ya mere a na-atụ aro ya na ndị ọrụ na-eji ya ReCaptcha V2 mejupụta nchekwa gị na ngwaọrụ ndị ọzọ, ọkachasị nchọpụta IP nke na-anwale ugboro ugboro iji dozie captchas.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Otu esi edozi google captcha na-akpaghị aka na ReBreakCaptcha
na maka window?
Nwere ike iji ya dịka ọ na-esite na nchekwa
Daalụ maka ịkekọrịta, agbanyeghị na ịgụrụla nke mbụ https://east-ee.com/ O yighị ka ọnụego kụrụ dị ịrịba ama, mana ọtụtụ ndị ọrụ gosipụtara na ọ nwere ike ịgwọta captchas kachasị mfe na ọnụ ọgụgụ dị ala.
N'ezie, ọnụego kụrụ dị ala (Na ule m na-ebu 1 n'ime 7 ọ bụla ha kpebiri), agbanyeghị, ngwangwa ahụ dị ma ọ ga-abụrịrị na akụrụngwa kachasị mma ka ọnụọgụ ndị a wee bilie.
Daalụ maka isiokwu ahụ, nke bụ eziokwu bụ na ọ enyela m nnukwu ọrụ!
Zaghachi na RecoveryPc
nwanne i nwere ike kowaa obere ihe banyere otu esi etinye ya na windo?
Daalụ maka ịkekọrịta ngwere; na-eduga na akara ngosi iji kpọọ obere oge. Ebe ọ bụ na ọ bụ na Eke Ọgba, ị ga-erite uru na ya.
Ekele obi ekele na ekele maka isiokwu ahụ, nke dị ezigbo mma ma na-atọ ụtọ. Ọ ga-amasị m ịzitere m scrypt maka windo, ebe ọ bụ na enweghị m ike ịhụ ya ebe ọ bụla, ana m ekele gị nke ukwuu maka oge na nlebara anya gị.
Zaghachi ka Wilber antonio
Ọ naghị edozi capcha ma zipụ m ịdọ aka na ntị a
Oge ịdọ aka na ntị: Enweghị ike ịhụ ffmpeg ma ọ bụ avconv - ndabara na ffmpeg, mana ọ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ
dọọ aka na ntị ("Enweghi ike ịchọta ffmpeg ma ọ bụ avconv - ndabara na ffmpeg, mana ọ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ", Oge ezumike
angelis laces dijo
Ndewo m na-agbali ịdebanye aha na ibe mana mgbe m banyere, enweghị m ike ijikọ RECAPTCHA gịnị ka nke a pụtara, mmadụ nwere ike inyere m aka
Zaghachi ụdọ ndị mmụọ ozi
jesus ramos dijo
Otu esi edozi capcha nke onu ogugu, mwepu, multiplication
Nzaghachi jesus ramos
na njikọ nbudata?
Joseph chukwunonso dijo
Ana m achọ ngwa maka capchat
Zaghachi jose fernandez
ana z. ugwu v. dijo
Ihe m chọrọ bụ ịgafe ma ọ bụ meghee captcha, enweghị m ike ịgafe ha, ha anaghị emepe
Zaghachi ana z. ugwu v.
Achọrọ m idozi nsogbu RECAPTCHA na amaghị m etu esi eme ya, ị nwere ike inyere m aka biko
Zaghachi iraida quiroz
I nwekwara ike iji GoodByeCaptcha nke na-etinye ihe nchọpụta onyogho nke na-egbochi nsogbu Gbalịa ọzọ mgbe ị na-anwa idozi ọdịyo ahụ ọtụtụ oge.
Zaghachi na MacKey-255
Otu esi egbu usoro na Linux mfe na fkill-cli
Rambox: Ihe niile dị na Otu agingzi ozi na Ọrụ Email